Vaovao - Fiarovana ny tontolo iainana sy maharitra - ny fironana amin'ny lamba voajanahary amin'ny lohataona sy fahavaratra 2022
Na dia niteraka korontana ara-tsosialy aza ny valanaretina satro-boninahitra vaovao, ny foto-kevitra ny fiarovana ny tontolo iainana dia ny fifantohan'ny mpanjifa sy ny marika hatrany. Mitombo hatrany ny fahalalan'ny olona ny fiantraikan'ny tontolo iainana eto an-tany amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ary ny fiarovana ny tontolo iainana dia efa zava-dehibe hodinihin'ny besinimaro. Ho an'ny indostrian'ny lamba lamba, ny fomba fametrahana vahaolana maharitra hatramin'ny fibre ka hatramin'ny lamaody, mampiasa kofehy voajanahary mba hampihenana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana, ary hahatsapa rojo famatsiana fanodinana azo zahana tanteraka amin'ny alàlan'ny teknolojia nomerika. Ho lasa firoboroboan'ny indostrian'ny akanjo amin'ny ho avy. Noho izany, ity lohahevitra ity dia hifantoka amin'ny fibre landihazo voajanahary, landihazo miloko voajanahary, fambolena biolojika azo havaozina, fandokoana zavamaniry, asa tanana miadana, fanodinana ary foto-kevitra fiarovana ny tontolo iainana hafa hamoronana fomba fiainana maitso tsara tarehy. Izy io koa no ho fampandrosoana lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny lamba lamba ao anatin'ny taona vitsivitsy. Mpamily fitakiana.
Kofehy landihazo voajanahary
Hevi-dehibe: landihazo voajanahary dia karazana landihazo tsy misy loto ary tsy misy loto. Amin'ny famokarana fambolena, zezika biolojika, fanaraha-maso biolojika amin'ny bibikely sy aretina ary fitantanana voajanahary no ampiasaina matetika. Tsy azo atao ny vokatra simika, ary ilaina ny tsy fandotoana amin'ny famokarana sy ny fihodinana. ; Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fanadihadiana iray dia naneho fa ny fambolena biolojika dia mampihena ny fiantraikan'ny landihazo amin'ny tontolo iainana, amin'izay manampy amin'ny fanatsarana ny harena voajanahary sy ny fahasalaman'ny tany ary mampihena ny akora simika misy poizina. Ny marika toa ny H&M sy Uniqlo dia nanambola tamin'ny drafitra landihazo biolojika mba hamaly ny hetahetan'ny mpanjifa “ny fandraisana andraikitra amin'ny fanamafisana ny landihazo.” Noho izany, ny fibre landihazo voajanahary dia nanatevin-daharana ny fiaraha-miasa maharitra lamba.
Process & Fiber: Ny fibre landihazo voajanahary dia maniry amin'ny fomba voajanahary. Ny fototra biolojika dia tsy maintsy apetraka amin'ny faritra iray izay tsy voaloto ny atmosfera, ny rano sy ny tany. Ny lamba voatenona avy amin'ny landihazo voajanahary dia misy famirapiratany mamirapiratra, fahatsapana malefaka ary mahazaka tsara; manana toetra mampiavaka ny bakteria sy ny deodorant izy io; manala ny soritr'aretina mahazaka izy io ary manampy amin'ny fikolokoloana ny hoditra. Ampiasaina amin'ny fahavaratra izy io ary mahatonga ny olona hahatsapa ho milay sy milamina.
Soso-kevitra fampiharana: Ny fibre landihazo voajanahary dia mety amin'ny lamba voajanahary toy ny landihazo, rongony, landy, sns., Ary azo ampiharina amin'ny fepetra takiana samihafa. Azo ampiharina amin'ny fampivoarana ny karazan-damba akanjo mahazatra sy mahafinaritra.
Landihazo miloko voajanahary
Hevi-dehibe: Nandritra ny fotoana lava dia fantatry ny olona fa fotsy ny landihazo. Raha ny marina, ny landihazo miloko dia efa nisy natiora. Ny lokon'io landihazo io dia toetra biolojika, izay fehezin'ny fototarazo ary azo ampitaina amin'ny taranaka mandimby. Ny landihazo miloko voajanahary dia karazan-damba vaovao izay mampiasa teknolojia bioengineering maoderina mba hambolena karazan-damba vaovao izay misy loko voajanahary rehefa mandrora ny landihazo. Ny vokatra vita amin'ny landihazo miloko dia manampy amin'ny fahasalaman'ny olombelona; ny fihenan'ny fanontana sy ny fandokoana amin'ny fizotran'ny lamba dia miompana amin'ny teny filamatra "revolisiona maintso" naroson'ny zanak'olombelona, ​​mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana, manampy ny firenena hitazona hatrany ny toerany amin'ny maha mpanondrana lamba farany azy, ary manapaka ny "varotra maintso" ”. Sakantsakana".
Process & Fiber: Raha ampitahaina amin'ny landihazo tsotra dia mahazaka hain-tany, mahatohitra bibikely kokoa, mihinana rano ny fidiran'ny tantsaha ary ambany ny fidiran'ny tantsaha. Ny kofehin'ny landihazo miloko voajanahary dia fohy sy marefo kokoa noho ny cottons organika hafa. Voafetra ny karazana loko, ny sasany tsy dia fahita firy, ary ny vokatra dia ambany. Ny landihazo miloko voajanahary dia tsy misy fandotoana, fitsitsiana angovo ary tsy misy poizina. Ny lokon'ny landihazo dia manolotra tan-voajanahary voajanahary, mena, maitso ary volontany. Tsy manjavona ary misy fanoherana azo antoka amin'ny tara-masoandro.
Soso-kevitra momba ny fampiharana: fibre voajanahary miloko voajanahary, mety amin'ny fampivoarana ny vokatra vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra, milamina amin'ny tontolo iainana, tsy mandoko. Marika Harvest & Mill, ny fomba fototry ny landihazo miloko organika dia nambolena, voadio ary nozairina tany Etazonia, ary ny entana vita amin'ny landihazo fanontana voafetra dia tsy ampy.
Fambolena biolojika azo havaozina
Hevi-dehibe: ny toeram-pambolena voajanahary dia manondro ny fambolena voankazo sy legioma tsy misy fandraisana anjara amin'ny simika, miaraka amin'ny fitantanana siantifika ho fenitra sy maitso voajanahary ho toy ny fotokevitra. Ity hetsika ity dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny tany, miaro ny biby, manatsara ny rano ary mampitombo ny harena voajanahary. Ireo vokatra fambolena voajanahary dia eken'ny sehatra iraisam-pirenena vokatra avo lenta, tsy mandoto ary sariaka tontolo iainana. Noho izany, ny fambolena biolojika dia novolavolaina hanatsarana ny fifaninanana amin'ny vokatra fambolena amin'ny fireneko eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, hampitomboana ny asa any ambanivohitra, fidiram-bolan'ny tantsaha ary hanatsarana ny famokarana fambolena.
Crafts & Fibers: Patagonia, mpisava lalana amin'ny fambolena azo havaozina, amin'ny alàlan'ny programa ROC, dia mitarika fibra sy fanangonana sakafo voajanahary sy mirindra, ary miara-miasa amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana mihoatra ny 150 any India mba hamatsy lamba fibre organika ho an'ny akanjo. Mametraha rafitra lamba azo havaozina mifototra amin'ny fitantanana ny tany.
Soso-kevitra fampiharana: Oshadi dia mampihatra ny drafitra "From Seed to Sewing", izay mikendry ny fanarenana hanatsara ny fambolena zavamaniry landihazo sy ny loko voajanahary. Ny akanjo fiarahamiasa voalohany dia ho hita amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet tsy ho ela. Ny Rooted Collection an'ny marika Wrangler no andiany voalohany mampifandray ny ambanivohitra amin'ny vokatra. Ny Jeans sy T-shirt dia voamarika amin'ny anaran'ny fiompiana landihazo.
Hevi-dehibe: ny fandokoana ny zavamaniry dia manondro ny fomba fampiasana zavamaniry isan-karazany misy pigmenta izay maniry voajanahary voajanahary mba hitrandrahana loko mba handokoana ireo zavatra nolokoana. Ny loharanom-boaloboky ny zava-maniry dia ny turmeric, madder, rose, nettle, eucalyptus ary voninkazo mavo.
Fomba sy fibre: ny pigmentes an'ny loko zava-maniry dia hita matetika amin'ny zavamaniry ary voadio amin'ny alàlan'ny fizotran'ny teknika, ary ireo singa miloko mateza sy tsy mihena. Ny fampiasana ny fandokoana zavamaniry dia tsy vitan'ny mampihena ny fahasimban'ny loko amin'ny vatan'olombelona sy ny fampiasana feno ny loharanon-karena voajanahary azo havaozina, fa mampihena be ihany koa ny poizin'ny rano maloto amin'ny fandokoana, izay mampihena ny vesatry ny fitsaboana maloto sy miaro ny tontolo iainana. .
Soso-kevitra momba ny fampiharana: Ny fandokoana ny zavamaniry dia manana fifandraisana tsara amin'ny kofehy voajanahary. Ny spectrum loko dia feno amin'ny landy, ny loko mamirapiratra, ary ny fastness tsara. Faharoa, ny fibre landihazo, ny volon'ondry, ny volotsangana ary ny modely dia mety kokoa; mandaitra ihany koa ho an'ny kofehy voaodina. Mety amin'ny akanjo vonona sy akanjo an-jaza ary ny kojakoja, atin'akanjo, akanjo an-trano, fanatanjahan-tena, vokatra lamba an-trano sns
Hevi-dehibe: miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka ny toe-karena iraisam-pirenena, miroborobo ny tsena famerenana amin'ny laoniny sy ny asa-tanana DIY, ary teraka ny fampiharana ny hevitra tsy misy fako izay mampiseho ny fanahin'ny fahalalahana, nanako ny lohahevitra momba ny asa-tanana sy ny lamaody miadana. Notadiavin'ny mpanjifa fatratra.
Crafts & Fibers: Amin'ny alàlan'ny fampiasana lamba efa misy, entana ary fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana mba hilalaovana aingam-panahy vaovao, fanenomana, fanaovana amboradara, fanjairana ary asa-tanana hafa dia ampiasaina hamoronana fomba amam-bolo namboarina tanana.
Soso-kevitra momba ny fampiharana: Ny vokatra dia mety amin'ny fanaovana kojakoja-tanana, kitapo, akanjo ary vokatra ao an-trano.
Hevi-dehibe: Raha ny fanadihadiana, 73% ny akanjo eto amin'izao tontolo izao dia miafara amin'ny fanariam-pako, latsaky ny 15% no voaverina ary 1% no ampiasaina amin'ny akanjo vaovao. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny landihazo dia voahodina amin'ny alàlan'ny milina, namboarina miloko, nopetahana tamin'ny fibre virijina ary nolokoina amina kofehy vaovao. Misy ihany koa ny ampahany kely amin'ny fomba fanovana simika ny landihazo mba hanampy azy hahatsapa ny tsingerina. Izany dia afaka mampihena ny fiatraikan'ny tontolo iainana amin'ny fambolena landihazo virijina, mampihena ny ala, ala rano ary famokarana gazy karbonika.
Process & Fiber: ny rafitra fanavaozana ny lamba sy ny fanodinana lamba dia afaka mamerina fako vita amin'ny landihazo betsaka avy amin'ny marika sy mpivarotra manerantany, amin'ny alàlan'ny fanasokajiana amin'ny alàlan'ny torolàlana sy ny laser, ary hamadika azy io ho fitaovana fampiasa indray.
Soso-kevitra momba ny fampiharana: Ny fanodinam-batana dia afaka manitatra ao anatin'ny fotoana fohy, ary ny fanavaozana ny marika lamba dia manohana ny fitadiavana sy ny fanodinana. Ny vokatra dia mety amin'ny fanjairana, akanjo ba, denim ary fomba hafa.
Fotoana fandefasana: Apr-29-2021